တိုင်းပြည်ရဲ့ သူရဲကောင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ အရမ်း ကို ပင်ပန်းနေကြပြီ😥😥😥 – Let Pan Daily
ပြည်​သူ​တွေကျန်းမာဖို့အတွက်​ မိမိရဲ့အသက်​ကိုရင်းပြီး​ ရှေ့တန်းမှာတိုက်​ပွဲ ဝင်​​​နေ​သော ကျန်းမာ​ရေးဝန်​ထမ်း​တွေပရဟိတညီအကို​မောင်​နှ​မ​တွေ အားလုံး ​ဘေးရန်​အ​ပေါင်းမှကင်း​ဝေးကြပါ​စေ ခင်​ဗျာ …….
တခြားသူတွေ ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို ကြောက်လို့အိမ်ထဲ မှာပဲ မိသားစုနဲ့ အတူတကွ ပျော်ပါးနေကြစဉ်မှာပဲ သူတို့ကတော့ နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် ၊ပြည်သူတွေအတွက်အသက်ကို ပဓာနမထားပဲ ရှေ့ဆုံးကနေ ရဲရဲဝန့်ဝန့်ထွက်တိုက်ကြတယ်။မကြောက်တက်လို့တော့ မထင်နဲ့ နော်။
သူတို့လဲ လူသားတွေပဲ ကြောက်စိတ်လေးတော့ရှိတာပေါ့။ ဘယ်အချိန်များ ရောဂါကူးစက်ခံရမလဲ စိတ်ထဲမှာ တထင့်ထင့်နဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်နေကြရတယ်။အဲ့ဒီလို နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အာဇာနည်တွေအတွက် အိမ်ထဲမှာနေရင်း သူတို့လေးတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီကြ ရအောင်လားဗျာ။
တိုငျးပွညျရဲ့ သူရဲကောငျး စတေနာ့ဝနျထမျးတှေ အရမျး ကို ပငျပနျးနကွေပွီ 😥😥😥
ပွညျ​သူ​တှကေနျြးမာဖို့အတှကျ​ မိမိရဲ့အသကျ​ကိုရငျးပွီး​ ရှတေ့နျးမှာတိုကျ​ပှဲ ဝငျ​​​နေ​သော ကနျြးမာ​ရေးဝနျ​ထမျး​တှပေရဟိတညီအကို​မောငျ​နှ​မ​တှေ အားလုံး ​ဘေးရနျ​အ​ပေါငျးမှကငျး​ဝေးကွပါ​စေ ခငျ​ဗြာ …….
တခွားသူတှေ ဒီကပျရောဂါဆိုးကွီးကို ကွောကျလို့အိမျထဲ မှာပဲ မိသားစုနဲ့ အတူတကှ ပြျောပါးနကွေစဉျမှာပဲ သူတို့ကတော့ နိုငျငံတျောကွီးအတှကျ ၊ပွညျသူတှအေတှကျအသကျကို ပဓာနမထားပဲ ရှဆေုံ့းကနေ ရဲရဲဝနျ့ဝနျ့ထှကျတိုကျကွတယျ။မကွောကျတကျလို့တော့ မထငျနဲ့ နျော။
သူတို့လဲ လူသားတှပေဲ ကွောကျစိတျလေးတော့ရှိတာပေါ့။ ဘယျအခြိနျမြား ရောဂါကူးစကျခံရမလဲ စိတျထဲမှာ တထငျ့ထငျ့နဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ အလုပျလုပျနကွေရတယျ။အဲ့ဒီလို နိုငျငံတျောကွီးရဲ့အာဇာနညျတှအေတှကျ အိမျထဲမှာနရေငျး သူတို့လေးတှကေို တဈဖကျတဈလမျးက ကူညီကွ ရအောငျလားဗြာ။
မိုးလဝေသ နှငျ့ ဇလဗဒေ ဦးစီးဌာန မှ မိုးလဝေသ ထုတျပွနျခကျြ
ကျုပ်သယ်ရင်း လောပန်းလင်မယား ထမင်းမစား ရေမသောက်ပဲ ငူငူကြီး တွေဖြစ်နေကြတာ သုံးရက် ရှိပြီ…